‘वर्ष दिनको तीज’, शीलु अधिकारीको रमाइलो तीज गीत – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २६ श्रावण आईतवार १३:५८
‘वर्ष दिनको तीज’, शीलु अधिकारीको रमाइलो तीज गीत
एजेन्सी, काठमाडौं। हिन्दु महिलाहरुको महान चाड तीज नजिकिदै गर्दा बजारमा तीजका गीतहरु आइरहेका छन् ।गायिका बुनु श्रेष्ठले पनि नया तीज गीत लिएर दर्शक तथा स्रोता माझ आएकी छिन् । गायिका बुनु श्रेष्ठ र गायिका शीलु अधिकारीको स्वर रहेको ‘ वर्ष दिनको तीज’बोलको तीज गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
रंगपत्रकार शान्ति प्रियको शब्द रहेको ‘ वर्ष दिनको तीज’ बोलको गीतमा संगीत सन्तोष श्रेष्ठ रहेको छ ।गीतलाई नारायण दंगालले एरेन्ज गरेका हुन् ।गीतमा ‘वर्ष दिनको तीज आउँदा मनै रमाइलो’ भन्दै ‘अर्को साल के हुन्छ के हुन्छ नाचौँ यसै साल’ भन्दै दिदि बहिनि मिलेर रमाइलो गरेका छन् ।गीतको भिडियोमा सबना आचार्य र साथीहरुलाई फिचरिंग गरिएको छ ।
‘आमाले बोकेको भारी’ सार्वजनिक !
‘हाँस्दा त आँशु झर्छ’ : न्ह्यू बज्राचार्यको संगीत सार्वजनिक
गल्ति होकी फसाउने खेल भयो, देशको लागि लड्नेलाई जेल भयो….
‘चौतारीको बाटो’ बोलको गीतको भिडियोमा विल्सन र रजनीले श्रीमान-श्रीमतीको भुमिकामा
PREVIOUS Previous post: विदेशी विनिमयदर : यस्तो छ आजको विदेशी मुद्रा
NEXT Next post: बजार : सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको भाउ